Petchises metụtara Franchise maka ọrịre | Ohere Franchise | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»South Africa»Petch Franchise metụtara
Franchises ndị metụtara Pet
Franchise ọhụrụ Pet
Na mkpa na-arịwanye elu maka ọrụ ndị na-azụ anụ dị ka ịgagharị nkịta, nlekọta anụ ụlọ na ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite ịdabere na ọrụ nlekọta anụ ụlọ iji lekọta ọrụ ndị a maka ha ma lekọta nkịta ha. Nke a bụ ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa ma ewerekwala okwu anyị maka ya. N'ihi na taa anyị ga-ekekọrịta ụfọdụ ọnụ ọgụgụ gburugburu ụlọ ọrụ anụ ụlọ na nnukwu onye ahịa ọ nwere inye karịa itinye ego.
Statistics gburugburu anụ ụlọ.
Ugbu a, anyị ga-edepụta ọnụ ọgụgụ ole na ole gburugburu ụlọ ọrụ ndị ahịa na uto nke ụlọ ọrụ ahụ ọ bụghị naanị akụ na ụba kamakwa ego dị ịtụnanya nke ọrụ ndị ụlọ ọrụ a na-enye obi ụtọ na-enye.
Ndị America na-emefu ihe karịrị $ 50billion kwa afọ na anụ ụlọ ha
24% ndị okenye UK nwere pusi nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya 10.9 nde nwamba ụmụ anụmanụ.
26% ọnụ ọgụgụ ndị okenye nọ na UK nwere nkịta nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na ya 9.9 nde anụ nkịta.
Ihe karịrị ọkara nke ndị mmadụ n'ụwa niile nwere anụ ụlọ ha na ha bi
Argentina, Mexico na Brazil nwere ọnụ ọgụgụ kasịnụ nke ndị nwere anụ ahụ, Russia na USA sochiri
A na-emefu ego karịrị nde £ 2.4 ndị Britain na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa na UK na anụ ụlọ.
Nkịta bụ anụ kacha akwụ ụgwọ iji na-elekọta ndị mmadụ na-emefu £ 178 kwa ọnwa na nkezi.
Gịnị ka ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi maka ụlọ ọrụ anụ ụlọ n'ụwa niile?
Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi nnukwu ahịa ndị ahịa yana ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ ị nwere ịkpọsa maka mgbe ị na-achịgharị mkpọpụta obodo. Onu ogugu onu ogugu enwere ugbua enyerela onye obula na acho itinye ego na oru anumanu ahu ezi nghọta na ahia maka oru ugbo na oke ihe.
Kedụ ụdị franchises dị iche iche dị?
Enwere ọtụtụ nri mkpọ azụ ụlọ dị iche iche n'ofe ụwa, dịgasị iche na nkịta na-aga n'ụzọ ruo n'ụlọ oriri dị iche iche nkịta ọfụma. Ya mere, a ga m akwado gị ka ị lelee anya ogologo site na otu nri franchises gị iji nweta echiche nke ga-akacha mma maka gị ebe ọ bụ na Franchiseek anyị na-enye nnukwu franchise dị iche iche na ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọzọkwa ọ bụrụ na ijighi n'aka banyere ịchụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịsụ n'anya mana ị nwere mmasị ịsụgharị asụsụ ana m atụ aro ka ị gụọ site na ndekọ ndekọ nri anyị zuru ezu.